Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fonenana mendrika | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fonenana mendrika
Mihasarotra hatrany ny fahafahana mipetraka amin’ny trano fonenana mendrika eny an-tanan-dehibe. Mitombo isan’andro anefa ny mponina manorim-ponenana andrenivohitra noho ny antony samihafa. Anisan’izany ny fahasarotan’ny fiainana any ambanivohitra na tsy mitsahatra aza ny filazana fa ny fambolena sy fiompiana no anisan’ny antoky ny hoavin’i Madagasikara. Asa ny fahamarinan’izany any aoriana any. Miankina amin’ny tetika pôlitika sy ny fahaizana manatanteraka azy izany.
Eo andaniny, mitaky ezaka fanajariana anio dia anio, toy ny zava-misy rehetra ny fahasahiranan’ny maro miharo korontana eo amin’ny lamin’ny fiarahamonina mikasika ny trano fonenana. Inona moa no afaka heverina hoe fonenana mendrika ? Tsotra ihany. Trano ialofan’ny tsirairay, ny ankohonany, hahafahany miketrika ny sakafony, hanadiovany ny tenany, misy toerana hanariany ny maloto, efitra hisakafoanany sy hatoriany, toerana sahaza hampirimany ny entany…
Mazava ho azy fa mifanipaka amin’ny tranga iainana ny fahafahan’ny olona sahirana miandrandra ny fahazoana hisitraka izany. Samy mahafantatra ny fidangan’ny vidin’ny tany an-tanan-dehibe ankehitriny. Arakaraky ny fandrosoana no manalavitra ny fahafa-mividin’ny maro an’isa eto anivon’ny mponina ny vidin’ny tany sy ny hofan-trano. Izany hoe raha tsy misy ny fehin-kevitra sy fahavononan’ny fitondrana hitondra vahaolana momba ny fanatsarana ny fonenan’ny vahoaka (izay mahantra ny maro) dia tsy hisy ny fiovana. Vao mainka ahiana hiharatsy aza ny fonenan’ireo sahirana indrindra.
Sarotra ny fiheverana hampidinana ny vidin’ny toerana fonenana anivon’ny tanan-dehibe, hany ka maro ny mpandinika no milaza fa ny hany fanafody dia ny famoronana «Tanana vaovao». Tsy vaovao ho an’ny Malagasy izany raha dinihina avy amin’ny tranga efa nisy toy ny fanomezana anarana hoe Tanambao izay maro eto amin’ny Nosy. Tsy vitan’ny fanapahan-kevitra fotsiny anefa izany raha fonenana mendrika no tiana hatao tanjona. Miankina amin’ny rafitrasa matanjaka ny fanorenana Tanana vaovao raha heverina atao ho fonenan’ny mponina miaina araky ny toetr’andro ankehitriny.
Vola aman-karena tsy toko tsy forohana no harendrika amin’ ny fananganana Tanana vaovao. Firifiry moa ny tanàna toy izany no ilaina mba ahafahana mamaha ny olana ankehitriny miseho any amin’ireo renivohitra eto Madagasikara ? Làlana tsy maintsy hizorana anefa izany. Tsy maintsy mazava ny tetika, na afaka heverina aza fa mety hahitana famantsim-bola entina anatanterahana an’izany. Sao indray lasa tetika ambony vavahady fotsiny. Ny vola tonga, ny asa tsy misy tokontaniny, ny trosa miavosa mamatotra ny taranaka.